आजको राशिफल बिस्तृतरुपमा लक्कि नम्बर सहित - Likhu Online
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार ०५:४९ प्रकाशित
वि.सं. २०७६ कात्तिक १२। मंगलवार। इ.स. २०१९ अक्टोबर २८। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। ने.सं. ११३९ कौलागा। कार्तिक कृष्णपक्ष
मानसिक शान्तिको लागि आफ्नो तनाउ बाहिर निकाल्नुहोस्। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। समस्या घर अगाडि नै बढ्दैछ, यसैले तपाईंले ध्यान दिएर बोल्नु पर्नेछ। कसैले तपाईंलाई प्रेममा धोखा दिन सक्छ, होसियार हुनुहोस्। खुशीयाली यात्रा सन्तोषजनक हुनेछ। तपाईंको जोडीले तपाईं कुनै मुड नभएको बेला वा भएको बेला बाहिर जानको लागि हुत्याउनाले तपाईंलाई रिस उठ्नेछ।
प्रेम, आशा, विश्वास, सहानुभूति, आशावाद र इमानदारी जस्ता सकारात्मक भावनाहरू तर्फ आफ्नो मन आकर्षण गराउनुहोस्। यी भावनाहरू एकपल्ट पूरा स्थापित भएपछि – मनले स्वतः हरेक परिस्थितिको सकारात्मक प्रतिक्रिया गर्नेछ। आर्थिकमा सुधार आउनाले तपाईंलाई अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सुविधा हुनेछ। तपाईंका अग्रजले तथा परिवारका सदस्यहरूले प्रेम र हेरविचार गर्नेछन्। तपाईंको जीवन खुशी दिनाले र विगतका गल्तीका लागि क्षमा गर्नाले योग्य बनिदै जान्छ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंको पीडा क्षण मै निकाल्न सक्छन्।
सामाजिक डरले तपाईंलाई सताउन सक्छ। यसलाई हटाउन आफ्नो आत्मसम्मानलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्। तपाईँको आशा अनुसार पैसाको लाभ हुनेछैन। साँझमा छोराछोरीसँग केही सुखद समय बिताउनुहोस्। आज तपाईं मुटु फुट्नबाट बच्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। पारिवारिक द्वन्द्वले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा असर पार्न सक्छ।
खोलेर राखेको खाना नखानुहोस् किनकि यसले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। आज गरेको लगानीले तपाईंको समृद्धि र वित्तीय सुरक्षामा अभिवृद्धि गर्नेछ। तपाईंले भरोसा गरेको कसैले तपाईंलाई पूर्ण सत्य नभनेको हुन सक्छ – तपाईंको अरूलाई विश्वस्त गर्ने क्षमताले आउने समस्याहरूको समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई भेटेपछि रोमान्सले तपाईंको मन ढाक्नेछ। तपाईंको हास्यपूर्ण चरित्र तपाईंको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हुनेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन्।
तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। तपाईंको कार्डमा धार्मिक स्थल वा आफन्तको घरमा भ्रमण गर्ने सम्भावना देखिन्छ। आज केही प्राकृतिक सौन्दर्यद्वारा तपाईं चकाचौंद हुने सम्भावना छ। तपाईंले आजको दिनलाई उत्तम बनाउन आफ्ना लुकेका गुणहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन्।
द्वन्द्वबाट जोगिनुहोस् किनकि यसले तपाईंको रोग अझै बढाउन सक्छ। “आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्नुहोस् र आज आफ्नो खर्च गर्नमा त्यति उदार हुने प्रयास नगर्नुहोस्।” तपाईंको साथीहरूले तपाईंको उदार व्यवहारको फाइदा नलिउन। कसै कसैको लागि सुन्दर उपहार र फूलले भरिएको रोमान्टिक साँझ। पत्राचार होशियारीसँग गर्नु आवश्यक छ। तपाईंको जोडी यति सुन्दर कहिल्यै थिएन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको प्रेमबाट राम्रो आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
कमजोर शरीरले मनलाई पनि कमजोर बनाउँछ, त्यसैले ऊर्जा प्राप्त गर्न पूर्ण आराम गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो साँचो क्षमता महसुस गर्नुपर्छ किनकि तपाईंमा बलको होइन तर इच्छाको कमी छ। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। बच्चाहरुले आफ्नो उपलब्धिले तपाईंलाई गर्व महसुस गराउनेछन्। तपाईं आज मितिमा जाने हो भने, विवादास्पद मुद्दाहरू नउठाउनुहोस्। तपाईंले कसैलाई दिएको सहायताको इनाम वा स्वीकार प्राप्त हुनेछ यसैले आज तपाईं सबैको प्रसंशाको पात्र हुनुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवन नीरस भएको पाउन सक्नुहुनेछ। केही खुशी मनाउनुहोस्।
अनावश्यक कुराको बहसमा आफ्नो शक्ति बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईंले तर्कबाट कहिल्यै केही पाउनुहुँदैन तर केही अवश्यै गुमाउनु हुनेछ भनेर आफैलाई सम्झाउनुहोस्। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। तपाईंले तिनीहरूलाई खुसी पार्न जति गरेपनि – तपाईंसँग बस्ने मानिसहरू तपाईंसँग धेरै खुसी रहने छैनन्। आफ्नो साथीको अभावमा पनि उपस्थिति महसुस गर्ने सम्भावना छ। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। तपाईंले आज आफ्नो जोडीसँग आफ्नो जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन बिताउनु हुनेछ।
मनोरञ्जन र आनन्दको दिन। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। आज आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतामा ध्यान दिनु तपाईंको प्राथमिकता हुनुपर्छ। आज, तपाईं र तपाईंको प्रेमी प्रेमको सागरमा तल्लीन हुनुहुनेछ, र प्रेमको उँचो अनुभव गर्नुहुनेछ। आफ्नो उपस्थिति बढाउन र सम्भावित साथीलाई आकर्षित गर्न सक्ने परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा कुराहरू आज साँच्चै सुन्दर छन्। आफ्नो जोडीको लागि रमाइलो साँझको योजना बनाउनुहोस्।
तपाईंको प्यारो सपना साकार हुनेछ। तर आफ्नो उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् किनकि धेरै आनन्दले केही समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। आज तपाईंलाई प्रदान गरिएका लगानी योजनाहरुमा तपाईंले दुई पटक हेर्नुपर्छ। साथी तथा आफन्तहरूसँग मजा गर्नुहोस्। प्रेममय जीवन जीवन्त हुनेछ। तपाईंले आजको दिनलाई उत्तम बनाउन आफ्ना लुकेका गुणहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। आफ्नो जीवनसाथीले आज तपाईंलाई अतिरिक्त विशेष समय दिनेछन्।
धेरै चिन्ताले मानसिक शान्तिमा बाधा पुर्याउन सक्छ। फिक्री, डर र चिन्ताको हरेक मात्राले शरीरलाई ठूलो असर गर्दछ, यसैले यसबाट बच्नुहोस्। संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। पत्नीसँग किनमेल गर्नाले अत्यन्तै रमाइलो हुनेछ। यसले तपाईंहरू बीचको समझमा पनि वृद्धि हुनेछ। प्रियको बिना तपाईंको समय बित्न गाह्रो पर्नेछ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। तपाईंलाई बिहान बिजुलीको कटौति वा अरू केही कारणले तयार हुन बिलम्ब गर्नेछ, तर तपाईंको जोडी आएर उद्धार गर्नेछन्।
आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। किन्न बाहिर जानु अघि तपाईंसँग भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। परिवारका सदस्य वा जोडीले केही खिचलो निकाल्नेछन्। तपाईंकी प्रिया केही रिसाएको जस्तो हुनेछिन् जसले तपाईंलाई दबाब थपिनेछ। पर्यटन र यात्राले खुशी ल्याउनेछ र अत्यधिक ज्ञानवर्धक हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको व्यञ्जनहरुको प्रलोभन् वा अंगालो जस्ता साना मागहरूको बेवास्ता गर्नुभयो भने उनी दुखी हुन सक्नु हुनेछ।